E-Stavropol Territory, indawo yomhlaba oniselwa ngenkasa izokhula izikhathi ezi-2024 ngo-2,5 - Umagazini i- "Potato System"
IGlavgosexpertiza yaseRussia ikhiphe isiphetho esihle kulandela ukuhlolwa kabusha komklamo olandelayo kanye nemibhalo yokulinganisa yokwakhiwa kabusha kwezakhiwo eziyinkimbinkimbi zesiteshi sokupompa iMezhdurechye Kuban-Yegorlyk esifundeni Izobilnensky eStavropol Territory.
Isiteshi sokumpompa echibini laseNovotroitskoye sinikeza abasebenzisi amanzi ngomsele omkhulu weNovoaleksandrovsky. Ingxenye yomsele wamanzi wesiteshi wangaphandle ohlelelwe ukwakhiwa kabusha ubusebenza kusukela ngo-1975. Ukuqaliswa kwephrojekthi kuzothuthukisa izinga lokuphakelwa kwamanzi kubantu futhi kwandise indawo yomhlaba wezolimo oniselwayo ngamahektha ayizinkulungwane eziyi-8,8.
Iphrojekthi ihlinzeka ngokushintshwa okuyingxenye yezingxenye zomsele wamanzi ngobude obungaphezu kwe-1 km. Amakhamera okubuka azokwakhiwa lapho kweqa umgwaqo nojantshi, nekhamera ye-flow meter esiteshini uqobo. Ngaphezu kwalokho, imishini izovuselelwa, isakhiwo sesiteshi sizokwakhiwa kabusha. Ngemuva kokushintshwa kwemishini yokumpompa, umkhiqizo wohlelo lokunisela uzokhula.
Ukwakhiwa kabusha, ukusebenza kabusha kwezobuchwepheshe nokwakhiwa kwezinhlelo ezintsha zokulungisa kabusha endaweni yesifunda kwenziwa ngaphakathi kohlaka lohlelo lukahulumeni lokuthuthukiswa kwezolimo, kanye nohlelo lomnyango "Ukuthuthukiswa kwesakhiwo sokufuna kabusha iRussia". Eminyakeni emihlanu edlule, abezolimo esifundeni, egameni likaMbusi, bathumele amahektha ayizinkulungwane ezingama-21 wokunisela okusha okubiza ama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane ezine. Njengengxenye yezinyathelo ezikhona zokusekelwa kombuso, imixhaso yenani elingaphezu kwama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane ezimbili yanikezwa ngalezi zinhloso, okwenza kwaba nokwenzeka ukunxephezela abalimi ngengxenye yezindleko ezitholakele.
- Kulo nyaka sihlela ukuxhasa amanye amahektha ayizinkulungwane ezinhlanu okunisela okusha ngemali engama-ruble ayizigidi ezingama-5. Ngama-ruble ayizigidi ezingama-800 kwisabelomali esihlanganisiwe, njengonyaka odlule, sizobuyisa imali engu-426% yezindleko zabakhiqizi bezolimo kwisabelomali. Ngokuvamile, ngo-50 sihlela ukwandisa lezi zindawo ngamanye amahektha ayizinkulungwane ezingama-2024 ngenani eliphelele lama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-52. Ngakho-ke, indawo eniselwayo esifundeni iminyaka eyisishiyagalombili kuze kube u-10 izokwenyuka ngamahektha ayizinkulungwane ezingama-2024, okuyindawo ephindwe izikhathi ezi-73 kunendawo ka-2,5, - kusho iPhini likaNgqongqoshe wezoLimo eStavropol Territory Vyacheslav Dridiger.
Ngo-2021, abalimi bezitshalo zengxenye yaseYurophu yeRussian Federation bangaphinda basongelwe yisomiso
Ngo-2020, ngaphezu kwama-3300 amathani amazambane athunyelwa evela eBashkortostan emazweni ase-Asia Ephakathi